Gudi Wasiiro ah oo loo saaray jahwareerka ka taagan hoos u dhaca sarifka lacagaha doolarka – idalenews.com
Gudi Wasiiro ah oo loo saaray jahwareerka ka taagan hoos u dhaca sarifka lacagaha doolarka
Iyadoo maalmihii u dambeeyay jahwareer badan uu ka taagnaa sarifka lacagaha doolarka oo hoos u dhac ku yimid ayaa Xukuumada Soomaaliya ku dhawaaqday inay tallaabo deg deg ah oo ay ku xasilineyso sarifka doolarka ay dhowaan qaadi doonto.
Kulan shalay Golaha wasiirada ku yeesheen magaalada Muqdisho ayaa loo saaray gudi soo diyaariya warbixin ku saabsan hoos u dhaca ku yimid doolarka iyo saameynta ay ku yeelatay shacabka.
Gudigan ayaa waxaa gudoomiye ka ah Wasiirka Maaliyada Maxamuud Xasan Suleymaan iyo xubno ka tirsan Ganacsatada, iyadoo lagu wado in Golaha wasiirada horgeeyaan sababaha hoos ugu dhacay iyo walaahowga ku dhacay shiling Soomaaliga.
Ra’iisul Wasaaraha Soomaaliya Cabdi Faarax Shirdoon ayaa sheegay inuu aad uga xun yahay halka uu marayo sarifka lacagaha doolarka, isagoo cadeeyay in xukuumada ay si deg deg ah wax uga qabaneyso.
Qiimaha sarifka doolarka ayaa maalinba maalinta ka dambeysa hoos u sii dhacaya, iyadoo wali uu taagan yahay qiimaha la iibiyo raashinka oo uu sicir barar ka jiro, waana saameyn weyn oo shacabka Muqdisho ku yeelatay.
Dadka naqdiya Ganacsatada Soomaalida ayaa sheegaya in hoos u dhaca ay sabab u yihiin ganacsatada oo waxa ay doonaan sameeya, isla markaana danooyinkooda eegta marka ay xaalada ku xumaato shacabka dan yarta ah.
Al-Shabaab oo faah faahin ka bixiyay dagaalo ka dhacay Bakool iyo Hiiraan